Ultrasonic Cool မြူခိုးဝိုင်ဖိုင်စမတ် Humidifier China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:စက်မှု Ultrasonic Humidifier,ဝါသနာရှင်နှင့်အတူ Humidifier,မြေတပြင်လုံးအိမ် Humidifier
Home > ထုတ်ကုန်များ > စမတ် Humidifier > Ultrasonic Cool မြူခိုးဝိုင်ဖိုင်စမတ် Humidifier
SMART WI-Fi နည်းပညာ: သင်ဿုံ app တစ်ခု အသုံးပြု. ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်! သင့်ရဲ့အဆင်ပြေသည်စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များအတွက်သင့်လျော်သောသော TuyaSmart app ကို Download လုပ်ပါနှင့်ပေါ်နှင့်ပိတ်သနျ့ရှငျးစသောသူကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ် mode ကိုပြောင်းပေးပါ။ ကလွယ်ကူအသုံးပြုရန် Alexa နှင့်အတူလည်ပတ်နိုင်အောင်အဆိုပါသစ်သားဘောဇဉ်ပျံ့အမေဇုံ: Echo နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
လေထုလျှော့ပေါ့: သင်တစ်ငြိမ်သက်လေထုဖန်တီးနိုင်အောင်ဒီအနံ့ပျံ့တိုင်းနေအိမ်, ရုံးသို့မဟုတ်ယောဂစတူဒီယိုများအတွက်စုံလင်သည်။ သင်တို့သည်နောက်တဖန်ခြောက်သွေ့သောအသားအရေနှင့်နှုတ်ခမ်းကနေဆငျးရဲခံရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကိရိယာကိုလေသန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့် humidify ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ပျော်အနားယူနှင့်အစဉ်အဆက်ထက်ပိုကောင်းခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒါရနံ့ပျံ့ပြီးပြည့်စုံသောပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးမည်!
သင့်လိုအပ်ချက်အိုင်တီ Adjustments: ကအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုများအတွက်ညဥ့်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လေသန့်ရှင်းစေသော 300ml ၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ အိမ်ပျံ့၏အလင်းကိုပိတ်ထားဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းနှောက်ယှက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မှိန်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအမြင့်ဆုံးရလာဒ်များအဘို့သင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အခါတိုင်းကချိန်ညှိနိုင်အောင်လေ humidifier, TuyaSmart app ကိုမှတဆင့်အချိန်ဇယားကိုတိုင်မားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဿုံ SAFE: အဆိုပါ Dituo ultrasonic ပျံ့လုံးဝအဆိပ်-အခမဲ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းပင်သေးငယ်တဲ့ကလေးငယ်များအတွက်လုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံစေနိုင်ပါတယ်! you` ပိုကောင်းတဲ့ night` s ကိုကြွင်းသောအရာများအတွက်အိပ်ပျော်နေသောနေစဉ်တွင်သင်တို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာသင့်ရဲ့အာကာသအတွင်းနှင့်ပင်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသုံးနိုင်သည်။ ရေထဲကရမှာပေါ့သောအခါ, အလိုအလျှောက်အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုများအတွက်အလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်။
App ကိုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ Humidifier ခုနှစ်တွင်ခရီးသွားမတ် Plug အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Google ပင်မစာမျက်နှာ Alexa စမတ်တီထွင်မှု Aroma Air Humidifier အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု Ultrasonic Humidifier ဝါသနာရှင်နှင့်အတူ Humidifier မြေတပြင်လုံးအိမ် Humidifier